You are at:Home»स्वास्थ्य»धेरैको ज्यान लिने ‘सेप्सिस’ के हो, कसरी र किन हुन्छ? लक्षण के के हुन्?
काठमाडौं । सेप्सिस भनेको शरीरमा संक्रमण फैलिएर ज्यानै जान सक्ने रोगको एक अवस्था हो। यसलाई शरीरमा रोग विरुद्ध लड्ने तत्वहरु वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले रोगसँग लड्दा उत्पन्न हुने एक किसिमको शारीरिक प्रतिक्रियाको रुपमा हेर्न सकिन्छ।